Maxaa looga hadlay kulanka RW Rooble iyo Musharixiinta? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa looga hadlay kulanka RW Rooble iyo Musharixiinta?
Kulan u dhaxeeya sii-hayaha Xil-ka Ra’iisul Wasaraha, iyo Golaha Midowga Musharixiinta, ayaa maanta ka dhacay Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta gurigiisa ku qaabilay xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta, oo ay hoggaaminayaan madax-weynayashii hore ee dalka Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Kulankaan ayaa looga hadlay sidii kiiska Ikraan Tahliil uu u heli lahaa caddaalad, isla-maraakan loogu madax baneyn lahaa hay'adaha garsoorka, halka la isku soo hadal qaaday dardar gelinta arrimaha doorashooyinka iyo joojinta xasaradaha siyaasaded.
“Waxaan maanta kulan mira dhal ah la yeelannay Raysalwasaare Rooble. Waxaan ka wada hadalnay sidii uu kiiska Ikraan Tahliil ku heli lahaa caddaalad, looguna simo hay’adaha garsoorka, in dardar la geliyo arrimaha doorashooyinka iyo la qaboojiyo xasaradda”. Ayuu yiri hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo ka qeyb galay kulanka.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo siyaasadeed ka waday guriga uu ka degan yahay Madaxtooyada, wuxuuna halkaas kulamo kula qaatay, xubno ka socday Ururrada Bulshada Rayidka ah, hay’adaha maaliyadda dalka, siyaasiyiinta Gobollada Woqooyi iyo wafdi sare oo ka socday Qaramada Midoobay.